Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Simbain’ny mpitondra ny ho avin’ny firenena
Efa ny ampahatelon’ny fe-potoam-piasan’ny filohampirenena amperin’asa sisa no ifampitondrana ankehitriny. Izao vao manan-kevitra hanolo ny filoham-pokontany ny mpitondra fanjakana. Hita mibaribary fa mpitondra tsy manana rafitra politika matanjaka sady manara-penitra. Ny endrika isan’ny isehoan’izany dia ny tsy fitokisana ny vahoaka fa ny fikimpiana eo anoloan’ny fanapahan-kevitra efa tsy nahitam-pahombiazana teto tato anatin’ny 20 taona.
Tsotra ny tian-kambara. Impiry impiry no nitakian’ny tsara sitra-po sy ny liam-pivoarana rehetra teto hoe “aoka mba ho olom-boafidin’ny fokonolona no hitantana ny fokontany fa rafitra fototra iankinan’ny fiainam-piaraha-monina ankapobeny ny fokontany”, nefa dia mbola ny sitra-pon’ny “mpilalao politika maloto” te hanao jadona eny anivon’ny fiaraha-monina no mitohy. Nokianina tato anatin’ny 20 taona io fihetsika fanendrena filohampokontany io satria miandrandra ny hamoritra vahoaka amin’ny fampandoavana hetra sy ny fanerena ny olom-pirenena hifidy ny kandidan’ny mpitondra no tanjon’ny olon’ny mpitondra. Tsy matoky tena ho tiam-bahoaka koa ny olony any amin’ny fokontany.
Mba rariny sy hitsiny ve, hoy isika. Asaina mifidy ihany ny fokonolona dia olona telo na dimy amin’ireo mpifaninana nahazo vato be indrindra no atolotra ny solontenam-pitondrana hotendrena ho filohampokontany. Dia sahin’ny solontenam-pitondrana ny manendry ny olona laharana fahadimy na laharana fahatelo, satria iny no akaiky azy. Mahamenatra. Nahoana, hoy ny maro, raha tsy rebirebena hifidy ny fokonolona raha ny tianareo mpitondra ihany no tendrenareo ho Ssfofokontany?
Ao amin’ny boriborintanin’Antananarivo faharoa ao, ohatra, dia mampihivingivin-doha ny afitsoky ny talen’ny kabinetran’ny solombava voafidy tamin’iny boriborintany iny (Rakotomanga Lanto). Olona ratsy laza eo anivon’ny fiaraha-monina no tereny sy ataony amboletra ho filohampokontany ka mampitraotra ny fokonolona. Isan’ny tena mafana amin’ny tsy fankasitrahana ny fihetsik’ity olon’ny Mapar ity ny ao amin’ny fokontanin’Ampamantanana sy Androndra. Baikon-dRtoa Rakotomanga Lanto ve? Tsy tompon-trano mihono amin’io izy, raha ny fantatra. Izany hoe na mitsikombakomba na manome vahana na mampirisika.
Etsy ankilany, teren’ingahy talen’ny kabinetran’i Lanto Rakotomanga handoa vola aminy (kolikoly) ny olona maniry hotendrena filohampokontany na te hamafisina ny maha-filoham-pokontany azy. Azo antoka fa tsy ny ao Antananarivo faharoa ihany no isehoan’izany satria tranga efa notoherin’ny maro hatramin’ny andron-dRatsiraka sy Ravalomanana farany teo, ary notohizan-dRajaonarimampianina ity fomba mamoehitra amin’ny fanendrena filohampokontany ity nefa dia tohizan’ny fitondrana ankehitriny.
Tsy tokony hadinoina fa vanim-potoana ilàna ny firaisankina sy fiaraha-mientan’ny olom-pirenena ny ankehitriny, na ny fiaraha-manarina ny firenena amin’ny tontolo ara-toekarena noho ny aretina covid 19 na ny fiatrehana ny fanarenana ny nateraky ny loza voajanahary, toy ny tondra-drano, na ny ho fiatrehana ny fifidianana atsy ho atsy… Famotehana ny ho avin’ny firenena no dikan’izao fihetsiky ny “mpilalao politika maloton’ny olon’ny fitondrana izao”, ka tokony hieritreritra ihany ianareo fa isan’ny hosimbain’ny vahoaka amin’izany ianareo.